आज ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य ! कतिमा कारोबार हुँदैछ हे’र्नुहोस्
Homeसमाचारआज ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य ! कतिमा कारोबार हुँदैछ हे’र्नुहोस्
April 25, 2021 admin समाचार 3093
साताको सुरुको दिन आइ’तबार सुन–चाँदीको भाउमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यव’सायी महासंघले आज सुनको मूल्य तोलामा ४ सय’ले घटेको हो । गएको शुक्रबार तोलाको ९१ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ तो’लाको ९१ हजार ३०० रुपैयाँमा कारो’बार भइरहेको छ ।
यस्तै, तेजाबी सुनको भाउ पनि तो’लामा ४०० रुपैयाँले घटेर तोलाको ९० हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको महा’संघले जनाएको छ । आज चाँदीको भाउ पनि तो’लामा १० रुपैयाँले घटेको छ । आइतबारका लागि चाँदीको भाउ तोलाको १३ सय १० रुपैयाँ कायम भएको महा’संघले जनाएको छ । शुक्रबार तोलाको १३ सय २० रुपैयाँमा का’रोबार भएको थियो ।
यो पनि पढ्नु’होस्, वाग्मती प्रदेशको राज’धानी हेटौँडामा सनराइज बैंक लिमिटेड हेटौँडा शाखाले तर’कारी बजारमा मोबाइल फोनबाट सहज र सुरक्षित क्युआर कोड भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । वाग्मती प्रदेश राज’धानी हेटौँडा बजारमा रहेको खोपेगल्ली तरकारी बजारमा मोबाइल फोनबाट सहज र सुर’क्षित क्युआर कोड भुक्तानी सेवा सञ्चाल’नमा ल्याएको हो । क्युआर सेवा १० वटा तरकारी पसलमा शुरुआत गरिएको छ । यसको विस्तार खोपेगल्ली हँुदै हेटौँडा– १० स्थित सब्जीमण्डीमा पनि गरिने जना’इएको छ ।
सो बैंकले नगद कारो’वारकोे विकल्पमा आफ्नो मोबाइल एपमार्फत क्युआर भुक्तानी गर्न सकिने डिजिटल प्रवि’धिलाई प्रवद्र्धन गर्दै आइरहेको शाखा प्रबन्धक सुदर्शन खति’वडाले जानकारी दिनुभयो । यस क्युआर प्रणाली अन्तर्गतको भुक्तानीमा नगद बोक्नु नपर्ने, नगद हराउने÷चोरी हुने सम्भावना नरहने, आफ्नो बैंक खा’ताबाट सिधै भुक्तानी गर्न मिल्ने जस्ता फाइदा रहेको उहाँको दा’बी छ ।
कोरोना महा’मारीको अवस्थामा यस्तो सेवा झन प्रभावकारी रहने उपभोक्ताले प्रति’क्रिया दिएका छन् । हेटाँैडा बजारलाई डिजिटल प्रणा’लीमा लैजान क्युआर सेवा राम्रो रहने हुँदा सबै व्यवसाय क्षेत्रमा यसको विस्तार गर्न आग्र’ह गरिएको छ ।
पहिलो चरण’को कोरोना कहरमा खोपेगल्ली दुवै सडक सञ्जालमा सिल गरेको अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्था नआ’उनका लागि सुरक्षित रहन डि’जिटल बैंकिङ सेवा लिन र दिन सबैलाई अनुरोध गरिएको छ ।
यस प्रणाली न’गदरहित कारोवारको एक उत्कृष्ट र भरपर्दो माध्यम बन्न जानेमा बैंक विश्वस्त रहेको छ र डिजिटल भुक्ता’नीमा विश्वसनीयता बढाउन र नगदरहित कारो’वारलाई थप प्रोत्साहन गर्न बैंकले डिजिटल कारोवारसम्बन्धी सचेतना कार्यक्र’मसमेत गर्दै आइरहेको प्रबन्धक खतिवडाले बताउनुभयो । – ओएस नेपालबाट
बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, हे’र्नुहोस कुन देशको कति पुग्यो ?
‘भ्वाईस अफ नेपाल’मा जान छुटेकी रचनाको सबैलाई चकित पार्ने स्वर, आवाज भनेको यस्तो हुनुपर्छ (भिडियो हे’र्नुहोस)
November 21, 2020 admin समाचार 6358
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशा’खाले ट्राफिक निय’म समेटिएको भिडियो सार्वज’निक गरेको छ । ट्राफिक महाशाखाले गीत संगीतको माध्यमबाट ट्राफिक नियम सिकाउने उद्दे’श्यले भिडियो बनाएको हो । भिडियोमा नृत्य:समेत ट्राफिक प्रहरीले नै गरेका छन् । गीतमा २५
November 16, 2020 admin समाचार 6347
March 10, 2021 admin समाचार 3458